တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Ly Quoc Tuan အား ယနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါ တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ စဈသံမှူး Senior Colonel Nguyen Thanh Dong နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံတို့သညျ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ကွီးမြားဖွဈသော ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနှငျ့ သမ်မတဟိုခြီမငျးတို့ လကျထကျကတညျးက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ဆကျဆံမှုမြားရှိခဲ့ပွီး ယခုနှဈတှငျ ကရြောကျမညျ့ သံတမနျဆကျဆံမှု (၄၅)နှဈအထိ တိုးတကျကောငျးမှနျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျ ရငျးနှီးမှုနှငျ့ ကုနျသှယျရေးကဏ်ဍ၊ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေး ကဏ်ဍ၊ ဆကျသှယျရေး ကဏ်ဍမြားအပါအဝငျ ဘကျပေါငျးစုံပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွေ အနမြေားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ အပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး တကျရောကျ လာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Ly Quoc Tuan အား ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ စစ်သံမှူး Senior Colonel Nguyen Thanh Dong နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ကြီးများဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် သမ္မတဟိုချီမင်းတို့ လက်ထက်ကတည်းက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဆက်ဆံမှုများရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် သံတမန်ဆက်ဆံမှု (၄၅)နှစ်အထိ တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍများအပါအဝင် ဘက်ပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေ အနေများအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြ သည်။